တရုတ် Luoxi ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်စက်ရုံ - EVA ရေမြှုပ် Interlocking ကွက်များနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်း Mat ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်
Eva ဖျာ play
36-sqft ဧရာ Mat 9-tile ကိုယစ်မျိုး Mat လွယ်ကူ Setup ကို Play ...
EVA ရေမြှုပ်ပဟေဠိ Mat နဲ့ Eva မြှုပ် Interlocking ကြမ်းပြင်ဖျာ ...
သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံကြမ်းပြင် Mat 3/8 လက်မထူထပ်သောရေမြှုပ် Interlockin ...
EVA ရေမြှုပ် Interlocking ကွက်များနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်း Mat ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်
ကလေး CARE အကြီးစားကလေး Play စ Mat
ကလေးများကော်ဇော Play ကိုဖျာ
2 နှစ်ဖက်အသုံးပြုမှု XPE ပစ္စည်းကလေးကစားဖျာ
anti-စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံ, ချေး-resistant ရေစိုခံ, အရေးအကြောင်းတွေ-resistant, တာရှည်ခံ
ဘား, လေ့ကျင့်ခန်း, ညီထပ်, ဆုတောင်းချက်
ရှန်ဒေါင်း, တရုတ် (ပြည်မကြီး),
opp အိတ်, စက္ဏူထူ
လနှုန်း 300000 Piece / ပိုငျးပိုငျး
သိုက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် 10-35 ရက်အတွင်း
2, non-အဆိပ်သင့်မြင့်မား elasticity
3, ကောင်းသော elasticity, SGS နှင့် ISO14001 လွန်ခဲ့လည်း ul တွေ့ဆုံရန်။
အဆိုပါ EVA Mat က Character:
1, ရေခုခံ: ရေမြှုပ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာမဟုတ်သောစုပ်, damp အထောက်အထား, ရေကောင်းခုခံပိတျထားသော။
2, ချေးခုခံ: ဒီတော့အပေါ်ပင်လယ်ရေ, ရေနံ, အက်ဆစ်, အယ်လကာလီနှင့်တူသော, ဓာတုချေးတားဆီးရန်။
3, processing: Non-ပူးတွဲကအပေါ်ယံပိုင်းပူပြင်းတဲ့ Press, ဖြတ်တောက်ခြင်းရန်လွယ်ကူသည်နှင့်နီးကပ်စွာ fit ။
4, Shockproof: ဒါဟာကောင်းသောခံနိုင်ရည်မြင့်မားခိုင်မာခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောကြားခံ function ကိုရှိပါတယ်။
5, အပူထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်: ကောင်းမွန်သောလျှပ်ကာ, အအေးနှင့်အနိမ့်အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
6, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: အဘယ်သူမျှမပိုင်ထိုက်သောအနံ့နှင့် Non-ညစ်ညမ်းမှု။
1. ခဲအခမဲ့, formamide အခမဲ့, Non-အဆိပ်မရှိအမိန့်, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ Eva ပစ္စည်း
2. ရေစိုခံ, Anti-စလစ်
3. install, clean ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အပြောင်းအရွေ့
1. သင်တစ်ဦး manufactory သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသလား
ဖြေကျနော်တို့ OEM / လိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ manufactory ဖြစ်ကြသည်။
2. ငါအခမဲ့အချို့နမူနာ get နိုင်သလား?
A: ဟုတ်ကဲ့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ Customize တောင်းဆိုမှုများ, အရောင်များ, ပုံစံမျိုးစုံ, အတိုင်းအတာ, ခိုင်မာသောစပါးပုံနှိပ်ခြင်း, 3D ပုံစံ, စွမ်းရည်နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုလက်ခံရရှိရန်ဝမ်းမြောက်ကြ၏ တဆက်တည်းမှာပင် MOQ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
4. အကယ်. သင်သည်ပူဇော်ကြောင်းငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုအမျိုးအစားကဘာလဲ?
ဖြေ T/T, L/C,paypal.Ali express,Escrow etc.
ဖြေအာရုံစိုက်ပေးပါ: ဖောက်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်မလိုအပ်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းထုံးစံတန်ဖိုးကိုကြေညာပါလိမ့်မယ်။ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတာဝန်များ, အခွန်နှင့်စွဲချက်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းသို့မဟုတ်ရေကြောင်းထဲမှာမပါဝင်ပါ။ ဤရွေ့ကားစွဲချက်အတွက်ဝယ်လက် '' တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်ဝယ်ရန်ကြိုတင်ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အကောက်ခွန်ရုံးနှင့်အတူစစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါကုန်ပစ္စည်းများပြန်လှည် ့. သို့မဟုတ်နိုင်ခြင်းအကောက်ခွန်-ရှင်းလင်းရေးအဘို့အဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်လျှင်, related ကုန်ကျစရိတ်ဖောက်သည်များကပေးဆောင်လိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုမဘယ်လို 6. ?
ကျနော်တို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ် QC အဖွဲ့ရှိသည်, ငါတို့ရှိသမျှသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းကုန်ပစ္စည်းများရဲ့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မည်အကြောင်း, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစစ်ဆေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့သည်သည့်အခါ client များကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ယခင်: Eva အမြှုပ်လေးတွေဖျာ
နောက်တစ်ခု: Interlocking မြှုပ်ဖျာထူထပ်နဲ့ Eva လေ့ကျင့်ခန်းကြမ်းခင်းဖျ & မဟုတ်သောအဆိပ်သင့်ကလေးတွေကကလေးများနေ့ & ကလေးအခန်းများအတွက်ပဟေဠိ Play
ကလေး Mat စန္ဒယား Play
ကလေးပဟေဠိ Play စ Mat
စီးတီး Play စ Mat
Dwinguler Play စ Mat
ကြမ်းပြင် Play စ Mat
Keyboard ကို Play စ Mat
အော်ဂဲနစ်လဲမှို့ Play စ Mat
ထူသောကလေး Mat Play
ကလေးငယ် Play စ Mat
Eva interlocking ကလေးများကြမ်းပြင်ကစားဖျာf/ ရေမြှုပ် ...
EVA ရေမြှုပ်ပဟေဠိ Mat နဲ့ Eva မြှုပ် Interlocking ကြမ်းပြင် ...
Non-အဆိပ် Eva မြှုပ်ဖျာ
ဂဏန်း Eva ကစားဖျာ
ပျော့ Eva လေးတွေဖျာ 36pcs play
Luoxi စက်မှုပန်းခြံ, Luozhuang, linyi ရှန်ဒေါင်း, တရုတ်